नेपाल आज | ‘अख्तियारलाई त केपी ओलीले गोजीमा राखेर हिँडेका छन्’ (भिडियोसहित)
‘अख्तियारलाई त केपी ओलीले गोजीमा राखेर हिँडेका छन्’ (भिडियोसहित)
शुक्रबार, १३ बैशाख २०७६ गते प्रकाशित - नेपालआज समाचारदाता
ज्ञानेन्द्र शाही युवा टिप्पणीकार हुन् । सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक विषयवस्तुमा उनी तीखो टिप्पणी गर्छन् । उनको मतमा बालुवाटारपछाडिको जमिन विष्णु पौडेलसहितले भाग पाउनु त लाजमर्दो कुरा हो । डाडुमा डुबेर मर्नुजस्तै हो । नटवरलालको घटना जस्तै भएको छ । नटवरलालले भारतको प्रधानमन्त्रीनिवास, लालकिल्लासमेत बेचेका थिए । विष्णु पौडेल पनि नटवरलाल हुन् ।
सिंहदरवार छोडेका छन् कि छैनन् थाहा छैन । सायर यिनीहरुले सिंहदरबार पनि बेचिसकेका हुनसक्छन् । विष्णु पाडेल आफैंले म दोषी हुँ भनेर स्वीकार गरिसकेका छन् । तर राज्य प्रेम सञ्जेलको पछि लागिरहेको छ । दुई हजार रुपैयाँ खायो भनेर प्रेम सञ्जेललाई पत्र काट्नेहरुले विष्णु पौडेललाई किन समातेन ?
सरकारी जग्गा मैले पैशा दिएर किनेको हो भनेर भनेका छन् । चोरीको सामान किनबेच गर्ने दुवै चोर हुन् ।
गोकुल बास्कोटा जस्तालाई विधिको शासन नै थाहा छैन । बालुवाटारको जग्गा बेचिनु नौलो कुरा होइन । त्यो त यिनीहरुले कति गरेका छन् कति । भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिनँ भन्ने केपी ओली आफैं भ्रष्टहरुबाट घेरिएका छन् । केपी ओलीका काठमाडौंमा दुईवटा घर कसरी आयो ? उनको सम्पत्तिमा छानबिन हुनुपर्दैन ? उनी राजनीतिमा लाग्नु पहिला डाक्टर त थिएनन् । विनोद चौधरीको कान्छो छोरा त पक्कै होइनन् ।
यो प्रकरणमा सबै भन्दा धेरै दोष नकपा र नेपाली कांग्रेसको छ । एनसेलबाट लिनुपर्ने लाभकर नै उठाएनन् । उनीहरुलाई उल्टो विदेश भगाइयो । चूडामणि शर्मा भएको समयमा उनलाई चिठी लेखिएको थियो । एनसेलले कर तिर्नुपर्ने कि नपर्ने भन्न्नेबारे । सरकारलाई कर नतिर बरु हाम्रो पार्टीलाई कर तिर भनेर चुनाव खर्च उठाए । एनसेलले कर तिर्नुपर्छ । शुरुमा भ्रष्टाचार गर्नेलाई पनि कारबाही गर्नुपर्छ तर अख्तियार नै केपी ओलीको हातमा छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग केपी शर्मा ओली ज्ञानेन्द्र बहादुर शाही